Dalet Media Cortex သည် AI-powered Media Workflows သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AI အ-powered မီဒီယာ Workflows မှ Dalet မီဒီယာ Cortex Accelerator Shift
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - စက်တင်ဘာလ 11, 2019 - Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူ, ရပ်တည်ချက် 2019.B8 အပေါ် IBC77 မှာဗားရှင်းအသစ်ကိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Dalet မီဒီယာ Cortexမီဒီယာပညာရှင်များ၏လက်ချောင်းထိပ်မှာအကြောင်းအရာထောက်လှမ်းရေးကိုထည့်လေ့မရှိ, အကို Artificial Intelligence (AI) ကို powered မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာဝန်ဆောင်မှု။ တစ်ဦးလစာ-အဖြစ်-you-go မော်ဒယ်အတွက်မျိုးစုံသိမြင်မှုန်ဆောင်မှုများ၏ orchestration ဖွတဲ့ဝန်ဆောင်မှု (SaaS) ပလက်ဖောင်းအဖြစ်တစ်ဦးက Software များ, Dalet မီဒီယာ Cortex အကြောင်းအရာတပုဒ်ကိုနှင့် Workflows ကို automation အားဖြင့်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ လက်ရှိ Dalet က Galaxy အပြင်ငါးတိုးပွား Workflows အသစ် Dalet မီဒီယာ Cortex ပေါင်းစည်းမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် IBC2019 မှာပြသ Features, စမတ်စာတန်းထိုးစွမ်းရည်, တိုးတက်လာသောသတင်းနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော် Workflows နှင့် Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ အသစ် AI အတိုးမြှင့်မှုများ Dalet က Galaxy ငါး Ooyala Flex ကိုနှစ်ဦးစလုံးမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖောက်သည်လျော့နည်းအချိန်အတွက်ပိုပြီးကြည့်ရှုအဖြစ်အသစ်သောစျေးကွက်မှပွင့်လင်းတံခါးများဖို့, ပိုမိုမြန်ဆန်ပိုပြီးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့ကို enable ။
"ပြီးခဲ့သည့် 18 လအတွင်းကျော်, ငါတို့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာများထားရှိပေးရန်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေထဲကနေ AI အကူးအပြောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုမြင်ကြပါတယ်။ ထပ်တလဲလဲအလိုအလျောက်မှ AI အန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် Contextual ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်အချိန်မီအကြံပြုချက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူ Workflows တိုးပွားရန် "အစဉ်အမြဲအရင်ကထက်ပိုပြီးအကြောင်းအရာနှင့်ပိုမိုပလက်ဖောင်းနှင့်ပိုပြီးစျေးကွက်အစေခံရန်ရှိသည်သောသူထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်ပဲ့တင်ထပ်နေ Raoul Cospen သတင်း Market က, Dalet ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်။ "အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ရွေးချယ်ပြီးရင်အလိုအလျှောက်, ပေးထားသောအသုံးပြုမှုကိုအမှုနှင့်မျှော်မှန်းရလဒ်များအတွက် AI အအင်ဂျင်၏ညာဘက်ရောနှောပေါင်းစပ်နဲ့ရိုးရိုး, Contextual ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအဆုံးအသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင်-to-နေ့က tools များအတွက်ပေါ်ထွက်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးဒေတာကိုတင်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ Dalet မီဒီယာ Cortex ဒီပါဘူး။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားအကြောင်းအရာနှင့်စိတ်ကြိုက် Multi-ပလက်ဖောင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များအစေခံရန်အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ပူးပေါင်းနှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အချိန်ပိုရည်စူးမီဒီယာပညာရှင်များနိုင်ပါတယ်။ "
Dalet မီဒီယာ Cortex, သိမြင်မှုန်ဆောင်မှုများပေါင်းစပ်, ဒဏ်ငွေ-တီးလုံးဟာမော်ဒယ်, ဗားရှင်းဒေတာအစုံ orchestrates ဖောက်သည် '' taxonomy သူတို့နှင့်အတူ aligns နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူများကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုပေးဖို့ Dalet application ကို stack အမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်မှာရလဒ်တွေကိုပေးတယျ နှင့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကအပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှု Dalet မီဒီယာ Cortex နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီးချထားနိုင်ပါတယ်။ ခွဲခြားရန်၎င်း၏မတ် metadata ကိုချဉ်းကပ်သည်အလိုအလျောက်အဖွဲ့အစည်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာ indexing နှင့်အသုံးပြုမှုပိုကောင်းအောင်အဓိကရှာဖွေရေးစကားလုံးများကိုစာကြောင်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို defining, ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားသတ်မှတ်။ ချောမွေ့စွာအဆိုပါ Dalet က Galaxy ငါး Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်း Workspace အတွင်းပေါင်းစည်းအပေါင်းတို့, AI အတာဝန်ယူထားသောဒေတာထိုကဲ့သို့သောစာတန်းသို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်အဖြစ်တစ်ဦး Contextual ထုံးစံ၌ပေးအပ်သည်။
IBC2019 မှာပြသနယူး Dalet မီဒီယာ Cortex ပေါင်းစည်းမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်ပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်:
Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါင်းစည်းရေး: မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကတ်တလောက်နှင့်မော်ကွန်းတိုက်ဘို့ငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာ, လွယ်ကူသောကြပ်မတ်လျက်ဖြန့်ဖြူးဘို့ OoyalaMAM မှအလိုအလျှောက်အညွှန်း metadata ကို Populate ။
စမတ်စာတန်းထိုး: Dalet မီဒီယာ Cortex အရည်အသွေးမြင့်မားသောရလဒ်များကိုနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်ငါးခွံအရှိန်မြှင့်, ကို manual စာတန်းထိုးအလုပ် 90% အထိအလိုအလျောက်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏မိန့်ခွန်း-to-စာသားကိုစွမ်းရည်သစ်ကိုစျေးကွက်များတွင်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်, 30 ဘာသာစကားများထက် သာ. ရရှိနိုင်ပါသည်။
တိုးတက်လာသောသတင်းနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော် Workflows: အလိုအလျောက်ပုံပြင်များနှင့်ဝါယာကြိုးများ tag ။ စမတ်လက်ထောက်နှင့်အတူနယူး entity ထောက်လှမ်းစွမ်းရည် (တည်နေရာ, ပုဂ္ဂိုလ်များ, အဖွဲ့အစည်းများ) ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုစီစဉ်ရာမှပုံပြင်များများအတွက်ဆက်စပ်နေသောအကြောင်းအရာအကြံပြုချက်များစီစဉ်ပေးထားတယ်။
custom အဘိဓါန်: အဆိုပါထုံးစံအဘိဓါန်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ရလဒ်များကိုပိုကောင်းအောင်အသုံးပြုသူများသတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းစကားလုံးများ, အလုပ်နှင့်ဈေးကွက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Dalet မီဒီယာ Cortex API ကို Enhanced: (လုပ်ငန်းအသွားအလာစွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင် microservices တစ်ပြောင်းလဲနေသောပေါင်းစပ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများစွယ်စုံများနှင့်ကျယ်ပြန့် Workflows တည်ဆောက်ရန်မီဒီယာကုမ္ပဏီဖွင့်မည်www.dalet.com/business-services/media-cortex) ။
Dalet မီဒီယာ Cortex အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dalet.com/business-services/media-cortex.
အတူတကွ သာ. ကောင်း၏ - တစ်ဦးအလွန်အထူး Dalet Pulse Event ကို Join!
Dalet အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါရန်ပုဂ္ဂလိက Briefing ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်ပိုကောင်းဖန်တီးကူညီစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ Dalet ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသရုပ်ပြသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။ မှတဆင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုဘွတ်ကင်လုပ်ရန် www.dalet.com/events/ibc-show-2019.
2019 IBC Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ dalet မီဒီယာ cortex AI အ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု Ooyala OTT SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2019-09-11
ယခင်: ဆားဘီးယားနှင့်ခရိုအေးရှားခုနှစ်တွင် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကိုခနျ့အပျဖြန့်ဖြူး
နောက်တစ်ခု: Facilis က၎င်း၏အသစ်က Object ကိုတိမ်တိုက်ပေါင်းစည်းမော်ကွန်းတိုက်များနှင့်အရံသိမ်းဆည်းဘို့ Qualstar LTO Libraries ကိုအသုံးပြုသည်